သင့်အားအထူးခံစားစေမည့် Gustavo Adolfo Bécquerမှစာပိုဒ်တို ၃၀ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Gustavo Adolfo Bécquer၏လက်ရာတစ်ခုကိုသင်သိကောင်းသိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သူ့အားသူ၏ကဗျာများကိုသို့မဟုတ်ကျောင်းတွင်ရေးသားရန်သင့်ကိုစေလွှတ်ခဲ့လျှင် ... ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်မှာသူ၏အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သော Rimas y Leyendas ကိုသင်သိပေမည်။ အားလုံး။ သူ၏လူသိနည်းမှုမှာ Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida ဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၈၃၆ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၈၇၀ တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသေဆုံးသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဒီနေ့အထိသူရဲ့လက်ရာတွေကြောင့်ငါတို့ရှိနေသေးတယ် နှင့်သူသည်မိမိစကားများအသီးအသီး၌ထားသောခံစားချက်။
ဂတ်စတာဗိုအဒေါ့လ်ဖိုဘီကိတ်သည်စပိန်လူမျိုးရေးဝါဒ၏ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာနှင့်ဝတ္ထုရေးဆရာဖြစ်သည်။ ယနေ့သူသည်စပိန်စာပေတွင်အရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေပြီးပညာရေးစင်တာများတွင်သူဆက်လက်လေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သူဟာသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးနာမည်ကြီးခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထသောအဖြစ်အပျက်များအပြီးသူသေဆုံးပြီးနောက်၌သူ၏အမှုတော်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်၊ သူ ပို၍ ပင်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာများ!
သူသည်အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်တွင်တီဘီရောဂါဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ ကြီးစွာသောအမွေထားခဲ့တယ်။ သူ၏အရေးအသားတွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေသံ၊ ဂရုတစိုက်ဘာသာစကားနှင့်စကားလုံးအတွက်အထူးလက်ဆောင်တစ်ခုရှိခြင်းကြောင့်သူသည်ထူးခြားသည်။ ဒီလူငယ်စာရေးဆရာရဲ့စကားစုအချို့ကိုခင်ဗျားတို့သိမှာပါ၊ သူဟာသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအမွေအနှစ်တစ်ခုအဖြစ်ထားခဲ့ရတာပါ၊ ဒီတော့ဒီနေ့သူတို့ဟာသူတို့နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်မှာပါ။ သူတို့ကခံစားမှု၊ ၎င်းတို့သည်သင့်ကိုယ်သင်အပ်နှံရန်၊ လှပသောဘ ၀ မည်မျှရှိသည်ကိုမှတ်မိရန်သို့မဟုတ်သင်၏ဘ ၀ ၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်၏နှလုံးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝစေသောအထူးလူပုဂ္ဂိုလ်ထံအပ်နှံရန်သင်ကိုယ်တိုင်အပ်နှံရန်အတွက်၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံးသောစကားစုများဖြစ်သည်။
Gustavo Adolfo Bécquerသည်သင်နှစ်သက်သောစကားများဖြစ်သည်
မင်းမှာနှလုံးရှိတယ်လို့ပြောတယ်၊ မင်းကနှလုံးသားတစ်ခုပဲလို့ခံစားရလို့မင်းပြောတာပဲ။ ဒါကနှလုံးမဟုတ်ပါဘူး ... ; ၎င်းသည်ရွေ့လျားနေသည့်အတိုင်းဆူညံသံကိုဖြစ်စေသောစက်ဖြစ်သည်။
ညညျးတှားလေထုဖြစ်ကြပြီးလေထုကိုသွား! မျက်ရည်များသည်ရေများ ဖြစ်၍ ပင်လယ်သို့သူတို့သွားသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကိုသွားလဲသိလား။
ကဗျာဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့သင့်ရဲ့စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ melancholic နဲ့မရေရာတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပဲ။
ချေးငွေများကုန်ဆုံးသွားသောကြောင့်စောင်းစောင်းတိတ်နေသည်ဟုမပြောပါနှင့်။ ကဗျာဆရာတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ကဗျာတွေအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ။
ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ရဲ့အမှောင်ထုတွေထဲမှာခေါင်းမာနေပြီးအဝတ်အချည်းစည်းရှိနေချိန်မှာ၊ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းရဲ့သာမန်ထက်ထူးကဲသောကလေးများဟာအနုပညာကိုနှုတ်ဖြင့်စကားအားဖြင့်သူတို့မြင်တွေ့ရန်နှုတ်ဆိတ်နေပြီးသူတို့ဟာကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်မှာလျောက်ပတ်စွာမိမိတို့ကိုယ်ကိုပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အလင်းနှင့်အမှောင်ထု၏ပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်း၊ မိန်းမ၊ အတုအယောင်များနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုပေါင်းစပ်ထားခြင်း၊ လူသည်ကြီးမြတ်မှုနှင့်သေးငယ်သောအနက်ဆုံးသောတွင်းနက်၊ ဘဝကိုသံနှင့်ရွှေချိတ်ဆက်ထားသောရှည်လျားသောကွင်းဆက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ အပြုံးတစ်ခု၊ နမ်းလိုက်တာနင့်နင့်နင့်နင်းကိုနင်းအတွက်ငါဘာပေးမည်ကိုမသိဘူး!
အရာအားလုံးသည်မုသာဖြစ်သည်။ ဘုန်းတော်၊ ရွှေ။ ငါကိုးကွယ်တာကမှန်တယ်၊ လွတ်လပ်မှု။
ဘုရားသခင်သည်မျက်မြင်မရသော်ငြားလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးကိုတစ်ဖက်မှဖယ်ထုတ်ရန်အမြဲတမ်းလက်ရှိသည်။
သိပ္ပံပညာသည်သက်ရှိအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိလျှင်၊ ပင်လယ်၌ဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်၌ဖြစ်စေ၊ သင်္ချာတွက်ချက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အနက်ဆုံးသောတွင်းတစ်ခုရှိသည်။ လူသားသည်၎င်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုမှ၎င်း၏သွားရာလမ်းကိုလျစ်လျူရှုသရွေ့၊ သူ့အတွက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတစ်ခုရှိနေသည်နှင့်အမျှကဗျာတစ်ပုဒ်လည်းပေါ်လာလိမ့်မည်။
သင်တို့ကိုတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်ခရမ်းရောင်ရင်ခွင်၌ရှိသကဲ့သို့သင်တို့ကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်သည့်လက်ရာမြောက်သောစာပိုဒ်တိုများဖြင့်ယက်ထားသောအံ့သြဖွယ်ပိုဒ်တစ်ခုကိုတီထွင်လိုသည်။ အဖိုးတန်တဲ့ရေမွှေးကိုခံနိုင်တဲ့ရွှေဖန်ခွက်ကိုထုခွဲထားတဲ့အတွက်ခင်ဗျားကိုပါ ၀ င်မယ့်ပုံသဏ္chာန်ကိုဖြတ်ချင်တယ်။
အထီးကျန်ခြင်းသည်အလွန်လှပသည် ... သင်ပြောပြရန်တစ်ယောက်ယောက်ရှိသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။ ကိုယ်တော်၌ရှိသောအရာခပ်သိမ်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သား။ မရ၊ သူ့အကြောင်းအားလုံးဟာယုတ္တိမတန်၊
နေသည်ထာဝရနေ ၀ င်နိုင်သည်။ သမုဒ္ဒရာသည်ခဏသာခန်းခြောက်လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာဝင်ရိုးသည်အားနည်းသောဖန်ခွက်ကဲ့သို့ကျိုးပဲ့သွားလိမ့်မည်။ သေခြင်းကကျွန်ုပ်ကို၎င်း၏အသုဘအခမ်းအနားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းစေနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏မီးလျှံသည်ငါ၌ဘယ်တော့မျှထွက်လာမည်မဟုတ်
ဤအရာအလုံးစုံတို့ကို၏ လှပသောစာကြောင်းများ သင်ပိုပြီးကြိုက်လား? ဖြစ်နိုင်သည် စိတ်ခွန်အားနိုးစာပိုဒ်တိုများ သင်၏အသက်တာ၏မည်သည့်အခိုက်အဘို့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » Gustavo Adolfo Bécquerမှစကားစု ၃၀ သည်သင့်အားအထူးခံစားရစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်
အိပ်မက်၏အဓိပ္ပာယ်: သူတို့ကိုမှန်ကန်စွာ decipher ဘယ်လို